Vocational Education က ဘာရမှာလဲ??? | Pronet Center
ဇော်ဂျီနှင့် ယူနီဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်
စကားဝှက် မိမိကို မှတ်သားထားပေးပါ
Learning Languageဘာသာစကားသင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်တာတွေကို မျှဝေ၊ မေးမြန်း၊ ဖြေကြားပေးကြမယ်။
Hot Mobile Appsသုံးကောင်းသော Mobile ဖုန်းအက် (ပ်) တွေအကြောင်း မျှဝေ၊ မေးမြန်း၊ ဖြေကြားပေးကြမယ်။
Today Career ဒီနေ့ခောတ် အလုပ်ရှာပုံ၊ ရှာနည်းများကို ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်း၊ အကူအညီပေးကြမယ်။
Pro Net Center Forumအခက်အခဲ၊ အကြံဉာဏ်များကို ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်း၊ အကူအညီပေးကြမယ်။
နောက်ဆုံးဆွေးနွေးမှုများကျောင်းသားတယောက်ဘယ်လို မှတ်ပုံတင်ရမလဲ။နယ်ကဆိုရင်ကော သင်တန်းတက်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားရှင့်။အင်္ဂလိပ်စာကို အလွယ်ဆုံးဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆရာ။Mobile Banking အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းအတွက်သင့်တော်သော antivirus ကိုအကြံပေးကြပါရှင့်။ဘယ်အလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲခင်မျ၊ အကြံပေးပါ။ProNet Forum	ProNet Forum သည် လူငယ်၊ ပညာသင်နေသူများ၊ အလုပ်လုပ်နေသူများ အချင်းချင်းအခက်အခဲများကို မေးမြန်းကူညီနိုင်
ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုတ် (သို့) English ဖောင့်များနှင့် ရေးသားနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။	။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားခြင်းဖြင့် အကူအညီပေးကြပါ။
ဇော်ဂျီ ယူနီကုတ်ပြောင်းမယ်Zawgyi Unicode Converter
ဇော်ဂျီနှင့် ယူနီဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်Myanmar Fonts & Keyboards
အဖွင့်စာမျက်နှာဆောင်းပါးများVocational Education က ဘာရမှာလဲ??? Vocational Education က ဘာရမှာလဲ???
Phasellus imperdiet. Mauris ac justo et turpis pharetra vulputate. Vocational ဟုဆိုလိုက်ကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုကို ရည်ရွယ်သော ပညာရေးတခုဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ AutoCAD သင်ကြားသူသည် AutoCAD အလုပ်ရရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်းဆင်းများသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (Industry) တွင် လိုအပ်သောအတတ်ပညာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အတိအကျသိရှိသင်ယူခဲ့ရ၍ တန်ဖိုးရှိသော ဝန်ထမ်းများဖြစ်လာမည်မှာ သေချာပါသည်။
သို့ပါ၍ အတန်းပညာများပြီးစီးပါသော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်တွင် အဆင်ပြေပြေ ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အတတ်ပညာများကို Vocational Education မှ ရရှိပါသည်။
ဇွန် 15, 2017 Vocational Education ဆိုတာဘာလဲ???၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ(JLPT)အတွက် လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်း 0တုံ့ပြန်မှုများ "Vocational Education က ဘာရမှာလဲ???"
စာရေးသားထားခဲ့နိုင် ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ	သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်
ProNet ပညာရေးစင်တာအကြောင်း	သင်တန်းစင်တာများ၊ နည်းပြများ၊ နှင့် လူငယ်များအတွက် လွယ်ကူ၊ လေ့လာ၊ ပညာရှာ နေရာတခုဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကျောင်းများ (နည်းပြဆရာများ) သည် အွန်လိုင်းသင်တန်း၊ စင်တာသင်တန်းများကို အခမဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
တက်ရောက်သူများသည် သင်တန်း၊ ဘာသာများကို တနေရာတည်းမှ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။
copyright © 2017 ProNet Center - Powered by InfoTech Myanmar.	X